“Waxay dhaheen in aan noqon rabo madaxweyne, maxaa diidaya taas?” ayay tiri Grace oo qiratay in ay doonayso in ay qabato xilka dalka ugu sareeya.
(Bidix) ayaa taageero u muujiyay xaaskiisa Grace (Midig) in ay noqoto madaxweyne ku xigeenkiisa
Dadka siyaasadda u dhuun duleela ee Zimbabwe ayaa Grace ku tilmaamay in ay dalkaas ka noqotay qof awood badan oo xitaa go’aamin kartay qofka badalaya Mugabe, haddiiba aysan iyada badalin.
Si kastaba ha ahaatee lama oga halka ay ku sugantahay Grace xili taliyeyaasha ciidanka ee awoodda la wareegay la sheegay in ay iyada si gaar ah u raadsanayaan, kuna eedeeyeen in ay madaxweynaha si qaldan uga faa’iidasatay.
Previous: Dr Maryan Qaasim oo ka hadashay sababta ay isaga casishay golaha wasiiradda
Next: Xukuumadda oo madnuucday dabaal-degyada iyo natiijooyinka Male-awaalka ah ee Doorashada